Madaxweyne Farmaajo oo sheegay in Midnimada Somalia darteed inuu isku casili karo – XAMAR POST
Madaxweyne Farmaajo oo sheegay in Midnimada Somalia darteed inuu isku casili karo
By Mohamed Ahmed On Aug 30, 2017
Madaxweynaha ayaa sheegay in wax kasta uu u sameyn karo ilaalinta Midnimada dalka, xitaa hadii uu xilkiisa uu ku weynayo, isagoo ugu baaqay siyaasiyiinta inay tanaasul la yimaadaan.
Hadalkan ayuu Madaxweynaha ka sheegay mar uu dadweyne kula hadlayay maqaaxi ku taal Xeebto Liido, halkaasoo uu shalay u damaashaad tagay.
“Wax alla wixii ay ku qancin karaan xataa hadii ay tahay in xilkeyga ku weynayo waxaa iga muhiimsan midnimada Soomaaliya, waxaa la rabaa marka siyaasiyiinta inay ka tanaasuli karaan jagada ay hayaan”ayuu yiri Madaxweyne Farmaajo.
Madaxweyne Farmaajo ayaa tusaale u soo qaatay xilligii uu ahaa Ra’iisul Wasaaraha, oo uu mar dambe iska casilay, “Aniga Ra’iisul Wasaare ahaa, waa ka tanaasulay, hadana waa i kanaa, shalay markaa meesha ka baxayay, dad baa waxay lahaayeen maxaa uga baxeysa ee meesha ku dhimo waa dhaqanki la yaqaanay ma ogtahay”.
Hadalka Madaxweynaha ayaa ahaa fariin ku socday maamulada dalka ka jira, iyadoo la og yahay in maamulka Somaliland uu horay ugu dhawaaqay inay ka go’een Soomaaliya inteeda kale, ayna yihiin dal madax banaan.
Saraakiil Al shabaab oo Maanta Muqdisho la keenayo
DEG DEG: Agaasimihii Wasaaradda Waxbarashada oo Xilka Laga Qaaday